जब तपाईं ट्याटु प्राप्त गर्नुहुन्छ यी 12 कार्यहरू नगर्नुहोस् - Tattoo Nepal | All About Tattoo in Nepal
ताजा ट्याटुको उचित देखभाल गर्न गाह्रो छैन, तर यसलाई गलत गर्ने तरिकाहरू छन्। जबकि तपाईं समान गतिविधिहरू प्राय जसो तपाईं सामान्यतया नयाँ ट्याटू प्राप्त गरेपछि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याटुलाई पूर्ण रूपले निको हुन को लागी 3-4-। हप्ता लाग्छ, त्यसैले त्यस बेला सम्म, यी १२ चीजहरू हुन् जुन तपाईले टाढा गर्नु पर्छ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ एक महिनाको लागि नुहाउन सक्नुहुन्न, जबकि तपाईंको ट्याटु निको भइरहेको छ, तर यसको मतलब यो हो कि तपाईंले आफ्नो ताजा मसीमा कति ओसिलो हुन्छ भनेर नजर राख्नु पर्छ। टोरोन्टोका टाटु कलाकार फिलिपले भनेका छन्, “नयाँ ट्याटू भिजाउनु भन्दा पहिले दुई हप्ता न्यूनतम हुन्छ।” नुहाउने र नुहाउने धारा ठीक छ, यदि तपाई कुल्दा यो केही सेकेन्ड भन्दा बढीको लागि पूर्ण रूपमा डुब्न नदिनुहोस्।
केही हप्ता सम्म पूरै पौडी खेल्नबाट बच्नुहोस् जब तपाईंसँग ताजा मसी छ। रासायनिक रूपमा पानी जस्तै पोखरीहरू तपाईंको ट्याटुको लागि राम्रो छैनन्, र पानीका प्राकृतिक शरीरहरू भने अझै खराब छन्। ताल र समुद्रहरू सबै प्रकारका ब्याक्टेरिया र अमीबासले भरिएका हुन्छन् जुन ट्याटूको क्षेत्रमा जान्छ र सम्भावित गम्भीर संक्रमण हुन सक्छ। कुनै ट्यान्की जोखिमपूर्ण व्यवसायबाट टाढा रहनुहोस् जब तपाईंको ट्याटु पौडी खेलेको भरमा निको हुँदैछ।
प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशलाई तपाईंको नयाँ ट्याटूमा पु Let्याउँदा तपाईंले मसीको साथमा गरिरहनुभएको प्रभावलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। तपाई ट्याटूलाई जोखिममा पार्दै हुनुहुन्छ ब्लीच र फेड हुँदै, र यो फस्टाउन सक्छ यदि क्षेत्र धेरै लामो लाग्यो भने धेरै घाम लाग्छ। एक चोटि निको हुने प्रक्रिया आउँदैछ, र तपाईंको स्केबहरू बन्द भएपछि, सूर्यमा जानुभन्दा पहिले सँधै तपाईंको ट्याटूमा सनस्क्रीन लगाउनुहोस्। यसले उनीहरूलाई लामो समय सम्म मद्दत गर्दछ र समयपूर्व लुप्त हुनबाट बचाउँछ।
र्‍यापिंग धेरै चाँडै हटाउँदै
तपाईंको ट्याटू कलाकारहरूले तपाईंको रगत मसीमा जे पनि लपेट्छ, यो एक राम्रो कारणको लागि हो! ताजा घाउमा छिर्न सक्ने कुनै ब्याक्टेरिया वा वायुजनित कणहरू राख्नको लागि तिनीहरूले यसमा छाप लगाइरहेका छन् – नबिर्सनुहोस्, तपाईंको नयाँ ट्याटू अनिवार्य रूपमा सयौं सानो पंचर मार्कहरू छन्, त्यसैले तपाईं यसलाई केही घण्टासम्म सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ।
तपाईंले फरक समयमा यसलाई राख्नको लागि आवश्यक पर्ने समय, त्यसैले तपाईंको कलाकारले तपाईंलाई के भन्छ सुन्नुहोस्। सामान्यतया, कम्तिमा २ घण्टा सम्म र्‍यापिpping राख्न यो उत्तम विचार हो, तर केहि कलाकारहरूले लामो सल्लाह दिनेछन्।
तपाइँको ट्याटुलाई र्‍याप गर्दै
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ट्याटुको रैपि off हटाइसक्नु भएपछि, यो आधिकारिक रूपमा सास फेर्न तयार छ, त्यसैले यसलाई पुन: लपेट्नुपर्दैन। यस बिन्दुमा, तपाइँ तपाइँको ट्याटु प्राय: सुक्खा रहन चाहानुहुन्छ, र यसमा प्लास्टिक थप्दा तातोमा फस्नेछ र धेरै ओसिलो बनाउनेछ। यस क्षेत्रमा धेरै ओसिलोपनले ब्याक्टेरियाको बृद्धि हुन सक्छ, र यो तपाईं अन्तिम ट्याटूमा अन्तिम चीज हो।
पहिलो २- weeks हप्तामा टाटु बनाउँदा एकदम पसिना आउँदैन, त्यसैले यदि तपाईं सौनास वा गहन व्यायाममा हुनुहुन्छ भने, केही हप्ताको लागि विश्राम लिनुहोस्। फेरि, एक उपचार ट्याटू मा अत्यधिक ओसिलो राम्रो छैन, र पसिना गणना। तपाईं स्पष्ट रूपमा केही डिग्रीमा पसीना जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं मात्र मानव हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो गतिविधिबाट टाढा रहनुहोस् जसले तपाईंलाई यस्तो पसिना महसुस गराउँछ कि तपाईंलाई पानीमा हाम फाल्नु पर्छ।
तपाईंको Scabs लाई उठाउँदै
स्क्याब्सहरू लिनु भनेको त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले कस्तो किसिमको घाउमा राख्नु हुँदैन, तर विशेष गरी तपाईंको ट्याटूमा छान्नु हुँदैन। उपचार प्रक्रियाको अंशको रूपमा, इनक्ड गरिएको क्षेत्रले केही हल्का खुरफेर पार्नेछ, र तपाईंले यसलाई छोड्नु पर्छ। स्केब्ड भागहरू आफ्नै खण्डमा खस्नेछ, त्यसैले केही दिनको लागि जहाँसुकै कालो बिटहरू भेट्टाउनुहोस् अपेक्षा गर्नुहोस् केही दिनको लागि जब यो शेड हुन्छ। तिनीहरूलाई उठाउँदा बिल्कुल उपचार प्रक्रियाको गति बढ्दैन, र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लामो गर्न पनि सक्दछ।
मेडिकेटेड मलहम प्रयोग गर्दै
पाली वा नेओस्पोरिन लागू गर्नु तार्किक विचार जस्तो लाग्न सक्छ, तर यी ती उत्पादनहरू हुन् जुन तपाईं वास्तवमै ताजा मसीमा राख्नबाट जोगिन चाहानुहुन्छ। यसको कारण यो हो कि यी मलहमहरूले उनीहरूको काम पनि राम्रो गर्छ, ताकि तपाईको ट्याटू पनि चाँडै निको हुन सक्छ।
एक छिटो निको पार्ने ट्याटू राख्नु, फेरि राम्रो चीजको रूपमा लाग्न सक्छ, तर जिंक र यस मलममा अन्य उत्पादनहरूले वास्तवमा तपाईंको छालाबाट मसी निकाल्छ, र यसलाई तपाईंको छालाको सतहमा राख्छ। यदि यो हुन्छ भने तपाईंको ट्याटू फीका हुनेछ, त्यसैले तपाईंको ट्याटूको लागि औषधि मलहमको सफा गर्नुहोस्।
यो सबैलाई लागू हुँदैन, र धेरै तपाईले आफ्नो मसी कहाँ पुग्छ भन्नेमा धेरै निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँको ताजा टैटू त्यस्तो ठाउँमा छ जहाँ तपाइँ सामान्य रूपमा दाढी गर्नुहुन्छ, तपाइँको बगल, खुट्टा, टाउको, वा अनुहार जस्ता, पूर्ण रूपमा निको नभएसम्म यसलाई रोक्नुहोस्। हो, महिलाहरू, यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईं लगभग एक महिनाको लागि अमेजोनियन गइरहनुभएको छ भने, त्यसोभए अगाडि योजना बनाउनुहोस् यदि तपाईंलाई जहिले पनि सहजता चाहिन्छ भने।
नयाँ ट्याटूमा धारिलो रेजर चलाउनु राम्रो विचार होइन। एक ताजा घाउमा स्क्र्यापिंग बाहेक, यसले कुनै पनी निको हुने क्षतिको पछाडि हटाउन सक्छ जुन उनीहरू आउनको लागि तयार हुनु अघि। एकचोटि तपाईंको स्क्याब्स स्वाभाविक रूपमा बन्द भएपछि, र तपाईंको ट्याटूको आकार र प्लेसमेन्टको आधारमा, उपचार प्रक्रियामा तपाईं weeks- weeks हप्ता हुन्छ, तपाईं फेरि सेभ गर्न सुरु गर्नु ठीक हुन्छ।
सुगन्धित साबुन प्रयोग गर्दै
तपाईंको ताजा ट्याटू सफा गर्नको लागि कुनै पनि र सबै सुगन्धित साबुनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्। सुगन्धले तपाईंको नयाँ ट्याटूको संवेदनशील क्षेत्रलाई उत्तेजित गर्न सक्छ। यसलाई सफा राख्नको लागि यस क्षेत्रमा पहिलो केही हप्ता मात्र अचेतन, जीवाणुरोधी साबुनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
ठूला टुक्रा को लागी तपाईले एक हप्ताको नजिकै पर्खनु पर्छ तपाईले ट्याटु दिनमा कति चोटि धुनुहुन्छ, तर सानो टुक्राले तुरून्त उपचार प्रभाव देखाउँदै रोक्न पर्छ।
कडा लुगा लगाउनु
भर्खरको ट्याटु क्षेत्रमा धेरै टाईट जस्तो न लगाउनुहोस्। तपाइँ तपाइँको ट्याटुलाई सास फेर्न र हवा पाउनको लागि सक्षम हुन चाहानुहुन्छ, र यो गर्न सक्नुहुन्न यदि यो कडा कपडा द्वारा दु: खी छ। तपाईंले लगाउने सामग्रीको प्रकारमा पसीनाबाट नमी सिर्जना गर्ने जोखिम पनि चलाउनुहुन्छ। तपाईंको नयाँ ट्याटूको साथ पहिलो दुई हप्ताको लागि तपाईंको ताजा मसीलाई कभर गर्नको लागि ढिलो र फ्लोर लुगा छान्नुहोस्। कपास जस्तै सास फेब्रिकहरू अझ बढी आदर्श छन्।
हिलिंग ट्याटुहरू नरकको रूपमा खुजली हुन्छ, तर तपाईंले स्क्र्याच गर्ने चाहनाको प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ! यो महसुस गर्न सक्ने जति सन्तुष्टिको रूपमा, तपाईको उपचार ट्याटू कोर्नु एक भयानक विचार हो। तपाईं आफ्नो स्क्याबहरू छिट्टै नै स्क्र्याच गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको औंलाहरू र हातहरूमा रहेको सम्भावित ब्याक्टेरिया उल्लेख नगर्न। यो एक खुजली हो जुन तपाईंले स्क्र्याच गर्नु हुँदैन!
तपाईंको ट्याटुलाई ओसिलो बनाउने उपचार प्रक्रियाको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश हो, तर तपाईं यसलाई अधिक गर्न चाहनुहुन्न। दिनमा केही पटक मोइस्चराइजरको पातलो तह उत्तम छ – अब धेरै धेरै हुन सक्दछ। यदि तपाइँको ट्याटुमा धेरै मोइस्चराइजर छ भने, यसमा धेरै ओसिलो हुन्छ, जसले ब्याक्टेरियालाई बृद्धि गर्न र बढाउन सक्छ। यसलाई क्रिमहरूमा प्रकाश दिनुहोस् र तपाईंको ट्याटू राम्रो आकारमा हुनेछ।
यदि तपाइँ ती ट्याटूहरू निको भईरहेको बेला ती १२ चीजहरूबाट बच्नको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईलाई जीवनका लागि लामो चिरस्थायी, स्वस्थ ट्याटूको ग्यारेन्टी छ। के तपाईंलाई कुनै पनि अनौठो ट्याटू पछि हेरचाह सल्लाह दिइयो? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!